I-8 Ininzi Ubukhulu Bogonyamelo Bokuziphatha Kwisondo Kwi-World | AASraw
I-AASraw ivelisa i-NMN kunye ne-NRC powders ngobuninzi!
/Blog/Ubugqirha beDrams/I-8 Ininzi Ubukhulu Bamachiza Wezobisi Zobunzima Kwili hlabathi
ezaposwa ngomhla 08 / 29 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ubugqirha beDrams.
Ukulahleka kwe-libido, kubini abasetyhini kunye namadoda, yingxaki eqhelekileyo, ngokuqhelekileyo ngenxa yokukhathala, ukuxinezeleka, iminyaka okanye umkhondo nje. Ukuvusa isifiso, kukho iziyobisi zesini ezisetyenziselwa ukukhulisa oku.
Kwi-1998, uLolawulo lwezoKutya nokuLawulwa kweMithi ye-United States ne-Yurophu (i-FDA ne-EFSA) yavuma i-ED yokunyanga imveliso ye-Viagra (), eyabangela ukuvakalelwa kwihlabathi jikelele. Iziphumo zekliniki ze-sildenafil citrate 171599-83-0 zipapashwe kwiphepha lezempilo laseNew England Journal of Medicine.
Ulwahlulo lweziyobisi zesondo
Ezo zisetyenziswa nguMadoda
Tadalafil (171596-29-5), isetyenziswe kunyango lwe-erectile dysfunction. I-tadalafil yinto ekhubaza i-enzyme i-phosphodiesterase yohlobo lwe-5 (PDE-5) elijongene nokukhubaza i-vasodilator nitric oxide, okwangoku kuthengiswa njengamacwecwe phantsi kwegama le-trade Cialis. Kuye kwavunywa ngoku kutshatyalaliswa kwonyango lwe-pulmonary blood pressure, kwaye sele isetyenziswe kwezinye iimeko. Iipilisi ze-Cialis, ze-5mg, i-10mg kunye ne-20mg yesosi, zilubala obomvu obufakwe ifilimu kunye ne-almond. I dose evumelekileyo yomshukela we-pulmonary hypertension yi-20 mg kwaye ithengiswa phantsi kwe-brand Adcirca.
Ucwaningo lwezonyango luye lwabonisa ukuba i-tadalafil inokuphucula umonakalo ochasene nemithi ye-nitrate. Oku kukholelwa ukuba yimbangela yentlangano ye-nitrate kunye ne-tadalafil kwi-nitric oxide / cGMP endleleni. Ngoko ke, izigulane ezithatha nayiphi na i-nitrate zithintela ukuthatha le mveliso.
I-Sildenafil citrate 171599-83-0 sisiyobisi esisetyenziselwa ukunyanga ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile kunye ne-pulmonary arterial hypertension (PPH). I-Sildenafil inokuthintela umsebenzi we-PDE5 ebantwini. I-PDE5 ibonakaliswe kakhulu kwisiponji sepenisi kwaye iphantsi kwezinye izicwili kunye namalungu. Emva kokuthatha i-sildenafil, i-corpus cavernosum vasomotor muscle iyaphumla phantsi kwenyango, ukuhamba kwegazi kuyonyuka, umzimba we-cavernous uxinene, kunye nelungu lobudoda limile, ngaloo ndlela kuvelisa isiphumo sonyango kwi-penile erectile dysfunction.
Izigulane ezine-penile erectile dysfunction zinexesha eliqhelekileyo lezenzo ze-27 imizuzu emva kokulawulwa komlomo (idatha yeklinikhi isasazwa phakathi kwe-12 kunye ne-70 imizuzu).
UVardenafil 224785-91-5 isetyenziselwa ukuphatha i-penile erectile dysfunction. Esi sizazisi sihlobo 5 phosphodiesterase (PDE5) inhibitor. Ukulawulwa komlomo kwesi sigulo kungaphumelela ukuphucula umgangatho kunye nobude bokumiswa nokuphucula izinga lokuphumelela ngokwesini sesigulane esinesigxina se-erectile. Ukuqaliswa nokugcinwa kwesikhokelo se-penile kuhlobene nokuphumla kweeseli ze-cavernous ezifayo.
Ukongezelela ekusebenziseni ukhathaza ukungasebenzi kwe-erectile, i-vardenafil inokuthintela ukukhutshwa kwangaphambili.
I-Avanafil 330784-47-9 ngumuthi wesigqirha esivela kwiqela le-PDE-5 inhibitors ezisetyenziselwa unyango lwe-erectile dysfunction. I-Vardenafil iye yavunywa njengesizukulwana esitsha se-phosphodiesterase i-5 (PDE5) inhibitor, kwaye i-vardenafil hydrochloride inamandla kakhulu, ikhethe kakhulu kwaye ibekezeleke. Ukufika kwayo kuye kwazisa iindlela ezintsha zokunyanga kwe-erectile dysfunction (ED).
Imiphumo ye-PDE-5 inhibitors idinga ukuvuswa kwesondo. Ngokuxhomekeke ekusebenzeni komntu ngamnye kunye nokunyamezela, umthamo unganyuswa ukuya kwi-200 mg okanye unciphise kwi-50 mg. Xa kuthelekiswa namanye ama-PDE-5 inhibitors, ukukhetha okuphezulu kwe-avanafil nge-phosphodiesterase-5 (PDE-5) yaboniswa, okwenza kube lula ukubekezela.
- UDenafil (iZydena)
I-Zydena (Udenafil 268203-93-6) yaqulunqwa eMzantsi Korea (ngu-Dong-A Pharm), eyenziwe ngo-2005. Udenafil uyi-PDE-5 inhibitor. I-Zydena ithathwa njengeziyobisi ezikhuselekileyo ze-erectile ukungasebenzi ngaphandle kwemiphumo emibi efana nombono ongenangxaki, akukho miphumo embi efunyenweyo. Kodwa eli lixesha elifutshane kwiimarike zamazwe ngamazwe, akukho zifundo ezininzi. Imizuzu ye-30 iyimfuneko ukuze isilungiso sisebenze. Ukungeniswa, ifom yefayili, ukuchaswa, imo yesenzo isilingana neViagra.
I-Flibanserin 147359-76-0 sisiyobisi esasiyilelwe unyango lwexinzelelo, kodwa safunyanwa singasebenzi kule ndawo kwaye ngoku siphinde samkelwa kunyango lokungasebenzi kakuhle ngokwesondo (HSDD) kwabasetyhini-nangona kunjalo, ukusebenza Akuqinisekiswanga apha kukhokelele kwiingxabano ezininzi malunga nesihloko se-flibanserin (Addyi) kunye nesiphumo sayo esityholwayo.
aasraw. com Kwiimvavanyo zonyango eziqhutyelwe, kuye kwafakazelwa ukuba le nto iphucula phakathi kwe-0.5 kunye ne-1 inani lamava ezesini ephumelelayo kwithuba lenyanga enye, xa kuthelekiswa ne-placebo, i-modestbo enokuthobeka kodwa ebonakalayo. Abafazi abaye bathatha inxaxheba kwisifundo baqalisa ngokulinganisa phakathi kwe-2 kunye ne-3 namava olwabelana ngesondo rhoqo ngenyanga.
Inkqubo yezenzo zeFlibanserin HCL, isebenza kwiindlela zokuhamba ngeendlela, zombini kunye nokukhuseleka. Ngokuthatha isenzo se-agonist kwi-5-HT 1A i-receptors ye-serotonin, indlela efana neyohlukeneyo yeziyobisi ezixhatshazelisayo kunye kunye nesenzo esichasayo se-5-HT 2A.
I-dapoxetine i-HCL 119356-77-3 isilwanyana esisetyenziselwa unyango lwe-ejaculation ngaphambi kokuqala. I-serotonin ekhethiweyo yokubuyisela i-inhibitor yesikhathi esifutshane kunye nesenzo. Ngokwe siseko sesifundo esedlulileyo, ukunyuswa kwexesha lesithathu ukuya kwezine lexesha lokubanjwa kwe-intravaginal of ejaculation lingacingelwa. Ukongeza, i-dapoxetine inokuphucula ukwaneliseka ngokwesini kunye nokulawulwa okubonakalayo kwindoda yokunyuka kwamadoda, nokunciphisa ubunzima kunye nobunzima bebonke.
I-Dyclonin HCL I-536-43-6 yinkinga ye-anesthetic engasetyenziselwa i-anesthesia yeembrane ezinamaqabunga phambi kokuhlolwa kwezonyango kunye neenkqubo. Kwakhona kufumaneka kwi-lozenges kunye ne-spray for the throat and throat area. I-Dyclonin ingasetyenziselwa ukunqanda i-gag reflex.
Le mveliso inokubangela ukuhanjiswa kweengxaki ezahlukeneyo zesibindi okanye isistim, ukuvimbela umxholo wokuthintela kunye nentlungu, kunye neempembelelo ze-antipruritic kunye ne-bactericidal ekhumbeni.
Le mveliso yincinci ye-ketone enamakha e-anesthetic yendawo. Inokuqala ngokukhawuleza kwaye ihlala ixesha elide. I-antipruritic, analgesic kunye nefuthe le-bactericidal kwesikhumba.
Isiphelo kunye nesinconywa
Izizathu zokuthatha iziyobisi zesini
Isilwanyana sesini singakunceda ukuxazulula ezinye iingxaki. Nangona kunjalo, ukuba emva kokuba uthathe ukuvuselela isikhashana, ingxaki yakho ayisombululwanga, unganqikazi ukubonisana neengcali (ugqirha okanye ugqirha) ukuveza ingxaki yakho. Olu lizayo liya kukunika iingcebiso kunye nezisombululo zokulwa nalo. Nazi iinjongo ezicacileyo zesicatshulwa zesini.
-Qulela ukuphinda ujabule ngexesha lokulala ngesondo
Nantsi injongo ephambili yesidakamizwa sesondo: ukunceda abantu bahlekise xa belalana nomlingane wabo. Ngenxa yoko, kubaluleke kakhulu ukuqwalasela umlinganiselo oboniswe kwibhokisi yomkhiqizo, kodwa ukuba uyawuhlonela, i-libido yakho inokukhuliswa kuphela kwaye umnqweno weengxelo zakho unokufumaneka kuphela.
-Ukulwa ne-blockages kunye nokulwa neengxaki zokulungisa
Ukuba ujongene nengxaki yokwakhiwa, ichiza lesini linokukunceda ulwe nalo. Ukongeza ekulweni nesi sifo, uya kufumana isini esanelisayo kwaye ungonelisa iqabane lakho ngaphandle koloyiko "lokonakala" ngexesha lesenzo; imvakalelo yokudana kunye neentloni ngexesha.
Abasetyhini abakwazi ukukhuselwa okanye ukuvalwa. Kwakhona, ukulwa nale ngxaki, ukuthatha inkunkuma yesondo kunokunomdla. Ngala mabhinqa aphelileyo, izithintelo zakho ziya kutshabalala kwaye uya kuziva uzalisekile xa usebenza.
Ukuphucula ubulili bakho kunye nolwalamano lwakho
Ngaba ufuna ukulala ngesondo? Ngaba uphupha ukufumana uvuyo ngexesha lakho? Isilwanyana sesini sinokukunceda ukuba uphinda uphinde uzive! Le mveliso inokuthathwa ngabantu kunye nabasetyhini abanqwenela ukuba baphile ngobundlobongela obukhulu kwaye banqwenela ukuba ubudlelwane babo bubonakale kwiimeko ezifanelekileyo kakhulu.
Ukuthatha isicatshulwa ngokwesini kuya kuba luncedo kwaye uyabulela kuye, ubuhlobo bakho obusondeleyo buya kuba bugqwesileyo!
-Ukuphucula i-libido yakho
Ngexesha lobomi, kunokubakho amaxesha apho indoda okanye umfazi engasanqweneli ukulala nomntu otshate naye. Le ngxaki ubukhulu becala yeyengqondo kwaye inokubangelwa zizinto ezahlukeneyo: ukudinwa, iingxaki zobuqu, uxinzelelo… Ezi zinokubangela ukwehla kwe-libido kunye nolonwabo.
Ukuphinda uphinde uphinde uzive, ukuthatha isilwanyana ngesondo kunokusebenza. Enyanisweni, kunokukunceda ukhulise i-libido yakho kwaye uphinde ufune isondo esithile!
Kwaye ukuba ufuna ezinye iingcebiso zokulondoloza ixesha lokuzonwabisa, nantsi inqaku eluncedo!
Yiyiphi enye into efanelekileyo yezobisi zesini?
Okwangoku, kukho ezininzi izivuselelo zesini kwiimarike. Ukukhetha nokuthenga okusemandleni kunokuba nzima kwaye akuqhelekanga ukuba ufumane ukulahleka ebusweni kwezi zigqibo ezininzi. Kwinqaku le nqaku, ndikunika izilwanyana ezinobuninzi ezisebenzayo eziza kukunceda ukuphucula i-libido yakho ngokuqinisekileyo!
Kodwa ngaphambi kokuba uzifumanise, yazi ukuba into yokuqala ukuyenza kukuthetha nodokotela wakho. Olu bungcali luza kukuxelela ukuba kufuneka ukhuthaze kwaye ukuba kuhambelana nomgangatho wakho wezempilo. Kwimeko nayiphi na into, uninzi lwezonyusa zobudlelwane bezesondo ezifana ne-Viagra okanye i-Vialis kuphela lunokunikezelwa kwimiyalelo yonyango kwaye ke kunyanzelekile ukuba udibane nodokotela wakho ukuba unqwenela ukuyifumana.
Kwakhona, iimveliso ezahlukeneyo ezinikezwe ngezantsi azikho i-aphrodisiacs. Akunakho ukunyusa i-libido yakho, kodwa ujonge ukunyusa ukuhamba kwegazi ngqo kwi-penis yakho ukufumana nokugcina ukulungiswa okufanelekileyo ngexesha lokwabelana ngesondo.
Ezi zikhuthazo ziyakunceda ukuba ube nokulungiswa okwanelisayo, kodwa kungekho ngaphandle kwemizamo. Ukuze kwenzeke, ukuvuselelwa ngokwesondo kuya kufuneka kufakwe.
I-MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: JW-642 kunye ne-OL-135 kunye ne-PF-750 I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2021